China Beach car ramp Manufacturer and Supplier | Ruiyi
Okporo osimiri ụgbọ ala
Teknụzụ nkwonkwo okpukpu abụọ na-enye onye ọrụ ohere ịpịba ya ụzọ mbụ wee gbanwee okirikiri ahụ ruo nha zuru ezu iji banye n'ime oghere dị warara.
Ugboro abụọ njikọ maka nkwakọ ngwaahịa: Teknụzụ nkwonkwo abụọ na-enye onye ọrụ ohere ịpịba ya ụzọ mbụ wee gbanwee ntụgharị ahụ gaa nha zuru oke iji banye n'ime oghere dị warara, dịka n'okpuru ATV ma ọ bụ n'azụ oche ụgbọala. Ngwongwo ndị a na-edozi nsogbu nchekwa ma dị mma maka oghere ndị na-enweghị ike ịnweta site na ramp ndị nkịtị.
Blanking, zọ, ekwe, ekwe, ịgbado ọkụ, polishing, sandblasting, spraying, nnyocha, nzukọ, nkwakọ, okokụre ngwaahịa.
Ugboro abụọ njikọ maka nkwakọ: Teknụzụ nkwonkwo abụọ na-enye onye ọrụ ohere ịpịpịa mbụ wee tụgharịa rọk ruo nha zuru oke iji banye n'ime oghere dị warara, dịka n'okpuru ATV ma ọ bụ n'azụ oche ụgbọala. Ngwongwo ndị a na-edozi nsogbu nchekwa ma dị mma maka oghere ndị na-enweghị ike ịnweta site na ramp ndị nkịtị.
Mbepụ nhazi: Chapu traction ahụ na-enye ọrụ nnabata adaba, na-ahụ na nrụgide na ibudata usoro adịghị emesi ike, ihe gị dịkwa mma ma nwee ntụkwasị obi na mkpọda.
Self-akpọchi omimi: naanị mkpa ịmeghe mkpọda nkwonkwo okpukpu abụọ, njiko nwere ike ịgbachi ebe na-ebugharị na ibu.
Fechaa aluminum: naanị 22 pound. Ogwe ọ bụla (44 lbs). Maka otu ụzọ), a na-eji aluminom na-eme mkpọda ugwu ndị a, na-enye ike na-enweghị atụ ma na-enweghị ịgbakwunye ibu.
Oghere nchekwa nchekwa oghere:The kọmpat atọ-anọghị n'ogige atụrụ imewe azọpụta ohere na-eme ka nchekwa-adịghị agafe agafe. Enwere ike itinye ya n'ime igbe igbe igbe igbe gwongworo, gụnyere njikwa maka ịdị mfe.
Nchekwa loading: Akụkụ belt ndị nwere ike ịgbanwu agbagha agbachitere ahụmịhe na ibudata ahụmịhe dị mma ma hụ na akụrụngwa akụrụngwa gị n'ụgbọala ahụ.
Nọmba Moder MW060
Ihe onwunwe Nchara
Ike 3000LBS / 1500KG
Aha Akara JF
Port nke Loading Port Qingdao
GW 78KG / AKWIRKWỌ
Nha 4000 * 500 * 106mm
NW 76KG / AKWIRKWỌ
Ngwugwu Ahịa Specific Iwu
Aha ngwaahịa Aluminium Ramp
Jiri ihe atụ
A na-ejikarị ụgbọ ala nke osimiri n'ụsọ ụgbọ mmiri maka ụgbọ ala na-aga n'okporo ụzọ na ụgbọ ala osimiri. Site n’itinye oghere n’azụ ụgbọ njem ahụ, ụgbọ ala osimiri nwere ike ịbanye ngwa ngwa ụgbọ njem site na ndagwurugwu ahụ, na-achọpụta njem dị mfe na ngwa ngwa na ibudata na ibudata.
♦ Jiri nhicha
Hụ ntuziaka ngwaahịa maka ntinye ụfọdụ
Ma ọ bụ kpọtụrụ anyị
Feedback Nzaghachi ndị ahịa
Asịwo nzaghachi mma dị mma, dị irè ma dị mfe, ikike na-ebu ibu, ogologo ndụ ọrụ, mgbakọ na-adaba adaba
Oge nke mmalite Qingdao, China
Agba Ahaziri agba
Akara Ahaziri Logo
Tụkwasịnụ Ikike 50000 Ibe / iberibe kwa afọ
Mbuga nkwakọ ngwaahịa
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa carbon igbe
Port Qingdao n'ọdụ ụgbọ mmiri dị na China
Etiti oge ② Ibu (Iberibe) 1-300> 300Est. Oge (ụbọchị)
Nke gara aga: High Quality Loading Car idozi ramp
Osote: Ubi ngwá ọrụ ifuru ogbe ifuru ụlọ
Q: Ngwaahịa gị ọ nwere ike iweta akara ngosi nke ndị ọbịa?
Q: you nwere ike ịchọpụta ngwaahịa nke gị?
Q: Kedu ka esi mepụta ngwaahịa gị? Kedu ihe ndị enwere?
A: Onwe ya mepụtara ma ọ bụ ahaziriMaterial: ígwè, ígwè, plastic, akwa, wdg
Q: Ogologo oge ole ka mmepe mmepe gị na-ewe?
A: 7 ụbọchị
Q: you na-akwụ ụgwọ maka ebu? Ego ole ka ọ bụ? Enwere m ike iweghachi ya? Kedu ka esi eweghachi ya?
A: Charge ebu ego, see okwu dị ka ndị ahịa si kpọmkwem ngwaahịa ọnọdụ na nke ukwu.
Q: Ogologo oge ole ka nkedo gị na-arụ ọrụ nke ọma? Olee otú ịnọgide na-enwe kwa ụbọchị?
A: Ike nke ọ bụla ebu
Q: Afọ ole ka afọ 10 bụ nhicha na ndozi nkịtị?
A: Ike imepụta dabere na ọnụọgụ dị iche iche.
Q: Gịnị bụ gị mmepụta usoro?
A: Onye ahịa ahụ na-ekpebi ngwaahịa dị ukwuu, ịke, nkwupụta, nkwekọrịta, ụgwọ, mmepụta na nnyefe
Q: Ogologo oge ole ka oge nnyefe ngwaahịa gị ga-ewe?
A: ọnwa 2-3, ihe ndabere akọwapụtara na oke
Q: you nwere opekempe iji buru ibu maka ngwaahịa gị?
A: Ọ bụrụ otu a, kedụ ntakịrị ihe kacha nta? Mba,
Q: Olee nnukwu ụlọ ọrụ gị? Kedu uru mmepụta kwa afọ?
A: 800 square mita, mmepụta uru 50 ijeri
Q: Ogologo oge ole ka ndụ ọrụ nke ngwaahịa gị?
A: afọ 3-5 na nkezi, dabere na ọnọdụ ngwaahịa akọwapụtara,
Ajụjụ: Ginị bụ ụdị ngwaahịa gị dị iche iche?
A: 1. Repairgbọ ala nrụzi
2. vehiclegbọ njem ntụrụndụ n’èzí
3. Akụrụngwa ngwaọrụ (ifuru ogbe na griin haus)
4. Ihe eji eme anu ulo
5. Ugbo ala ugbo ala ugbo ala
6. PU ụkwụ
7. Rubber ụkwụ anọ
8. Atv rampu
Q: Gịnị bụ gị ụgwọ ụzọ?
A: Nyefe ego
Ajụjụ: Kedu otu na ahịa ndị ngwaahịa gị dabara adaba?
A: Ndi otu ndụ na-adị kwa ụbọchị,
Ajụjụ: Olee mba na mpaghara ndị ebupụtara ngwaahịa gị?
A: USA, Canada, UK, France, America, Europe, wdg
Q: Ngwaahịa gị ọ dị oke ọnụ? Kedu uru ndị a kapịrị ọnụ?
A: Ee, otu ngwaahịa ahụ, anyị nwere ezigbo ihe na ọnụahịa.
Ajụjụ: yourlọ ọrụ gị ọ na-esonye n’ihe ngosi ahụ? Gịnị bụ nkọwa?
A: Soro na ngosi, China Import na Export Fair, wdg
China Concrete igwekota, Caster ụkwụ anọ, PU Wheel, Concrete igwekota Truck, China PU wiil, China Pu ụfụfụ Wheel,